Bruno Fernandes oo ka carooday Kooxda Manchester United kaddib markii uu fashilmay heshiiskii uu dhankooda ku aadi lahaa! – Gool FM
(Manchester) 25 Jan 2020. Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon Bruno Fernandes ayaa lagu soo waramayaa inuu aad uga carooday dadaallada ay Manchester United ugu jirtay saxiixa bishaan ee hadanna noqday kuwa fashilmay marka laga cabir qaato sida aan wali loo gaarin go’aan rasmi ah.
Inkastoo la sheegay inuu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Premier League ka dhisan ee Manchester United, Fernandes ayaa weli la sii joogaya Sporting, maadaama labada koox ay ku heshiin waayeen lacagta xiddigan lagu iibsan karo.
United ayaa lagu soo waramayaa inay 8 milyan oo gini ay ka yar tahay qiimaha Sporting doonayso, inkastoo guddiga kooxda Ingiriiska aysan isku taxalujin inay ka soo baxaan shuruudaha Sporting, waxa ay sheekadda ku dhammaatay qaab fashil ah.
Sida laga soo xigtay Jariiradda The Times, Fernandes ayaa ka carooday sida ay Man United diyaar u tahay iyo sida aysan u doonaysin inay madaxiisa dul dhigaan lacag u qalanta, si uu ugu wareego kooxda 13 jeer hanatay horyaalka Premier League.
Kubbadsameeyahan ayaa wajahaya rajada ah inuu ka baxo kal ciyaareedkan Sporting, inkastoo kooxdiisa reer Portugal ay u baahan tahay inay iska iibiyaan xiddigan haddii ay ku heli karaan lacag u qalanta waxtarkiisa.
Manchester United ayaa horraantii bishaan kali ku ahayd doonista xiddiga reer Portugal ee Bruno Fernandes, balse waxaa raacdadiisa ku soo biirtay isbuucii la soo dhaafay kooxda ay dariska yihiin ee Manchester City taasi oo la fahamsan yahay inay diyaar u tahay bixinta lacagta ay doonayso Kooxda reer Portugal.
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Real Valladolid.… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)